Izindaba - i-valve yokushisa ephezulu
Ungazikhetha kanjani izinto ze-valve ngaphansi kwezimo zokushisa okuphezulu
Kuhlelo lokuhambisa uketshezi, i-valve iyinto edingekayo yokulawula, ikakhulu enemisebenzi yokulawula, ukuphambukisa, ukulwa nokubuya emuva, ukusika, nokususa. I-valve isetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni neyezomphakathi. I-valve yokushisa ephezulu uhlobo oluvame ukusetshenziswa kuma-valve. Izici zayo ezithile zingokulandelayo: ukusebenza okuhle kokucima, ukucisha okujulile kungenziwa; i-weldability enhle; ukumuncwa okuhle komthelela, kunzima ukukulimaza ngodlame; I-temper brittleness ivame ukuba ncane njalonjalo. Kunezinhlobo eziningi kakhulu zamaphayiphu okushisa okuphezulu. Okuvame kakhulu ukushisa okuphezuluamavalvu omvemvane, ukushisa okuphezulu ama-valve webhola, izihlungi ezinamazinga okushisa aphezulu, nezinga lokushisa eliphakeme ama-valve esango.
Amaphayiphu okushisa okuphezulu afaka ama-valve esango lokushisa okuphezulu, ama-valves okuvala ukushisa okuphezulu, ama-valve wokushisa okuphezulu, ama-valves ebhola eliphezulu, ama-valves we-butterfly aphezulu, ama-valve wezinga lokushisa okuphezulu, ama-valve okushisa okuphezulu, kanye ingcindezi eshisa kakhulu yokunciphisa ama-valve. Phakathi kwazo, okusetshenziswa kakhulu ama-valve esango, amagilavu ​​wembulunga, ama-valve wokuhlola, ama-valves ebhola namaveluvemvane
Izimo zokusebenza okushisa okuphezulu ikakhulu zifaka izinga lokushisa eliphansi kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme Ⅰ, izinga lokushisa eliphakeme Ⅱ, izinga lokushisa eliphakeme Ⅲ, izinga lokushisa eliphezulu Ⅳ, kanye nezinga lokushisa eliphezulu Ⅴ, okuzokwethulwa ngokwehlukana ngezansi.
1. Izinga lokushisa eliphansi
Ukushisa okuphansi kakhulu kusho ukuthi izinga lokushisa elisebenzayo le-valve lisendaweni engu-325 ～425 ℃. Uma le ndlela ingamanzi nomoya, iWCB, WCC, A105, WC6 neWC9 zisetshenziswa kakhulu. Uma okuphakathi kunguwoyela oqukethe isulfure, i-C5, CF8, CF3, CF8M, CF3M, njll., Emelana nokugqwala kwe-sulfide, isetshenziswa kakhulu. Asetshenziswa kakhulu kumadivayisi asemkhathini nokucindezela futhi anciphise amadivayisi okupheka ezindaweni zokuhluza. Ngalesi sikhathi, ama-valve enziwe nge-CF8, CF8M, CF3 ne-CF3M awasetshenziselwa ukumelana nokugqwala kwezixazululo ze-asidi, kepha asetshenziselwa imikhiqizo kawoyela equkethe isulfure namapayipi kawoyela negesi. Kulesi simo, izinga lokushisa elisebenza kakhulu le-CF8, CF8M, CF3 ne-CF3M lingu-450 ° C.
2. Ukushisa okuphezulu Ⅰ
Lapho ukushisa kokusebenza kwe-valve kungu-425 ～550 ℃, yisigaba esinokushisa okuphezulu I (okubizwa ngokuthi isigaba se-PI). Impahla esemqoka ye-PI grade valve ithi “high temperature temperature grade medium carbon chromium nickel rare earth titanium high quality resistant-heat” with CF8 as the basic shape in ASTMA351 standard. Ngoba ibanga le-PI ligama elikhethekile, umqondo wensimbi engagqwali eshisayo (P) ifakiwe lapha. Ngakho-ke, uma osebenzayo kungamanzi noma umusi, yize insimbi eshisa kakhulu i-WC6 (t≤540 ℃) noma i-WC9 (t≤570 ℃) nayo ingasetshenziswa, ngenkathi imikhiqizo kawoyela equkethe isulfure nayo ingasetshenziswa insimbi yokushisa okuphezulu C5 (ZG1Cr5Mo), kepha azikwazi ukubizwa ngokuthi yi-PI-class lapha.
3. Ukushisa okuphezulu II
Ukushisa okusebenzayo kwe-valve kungu-550 ～650 ℃, futhi ihlukaniswa njengokushisa okuphezulu Ⅱ (okubizwa ngokuthi yi-P Ⅱ). P valve ikilasi lokushisa eliphakeme isetshenziswa ikakhulu kusetshenziswa uwoyela osindayo wokuqhekeka wedivayisi yokuhluza. Kuqukethe ulwelwesi lokushisa oluphakeme oluqinile olugqokekayo olungasetshenziswa emgodini wokujikeleza kathathu nezinye izingxenye. Okubalulekile kwe-valve yebanga le-PⅡ “izinga lokushisa eliphakeme Ⅱ grade medium carbon chromium nickel umhlaba ongajwayelekile we-titanium tantalum oqinise insimbi emelana nokushisa” nge-CF8 njengokwakheka okuyisisekelo ku-ASTMA351 standard.
4. Ukushisa okuphezulu III
Ukushisa okusebenzayo kwe-valve kungu-650 ～730 ℃, futhi ihlukaniswa njengokushisa okuphezulu III (okubizwa ngokuthi yi-PⅢ). Amaphayiphu okushisa aphezulu we-PⅢ asetshenziswa kakhulu kumayunithi amakhulu wokuqhekeka kawoyela asindayo ezindaweni zokuhluza. Impahla esemqoka ye-PⅢ class lokushisa okuphezulu i-valve yi-CF8M esekwe ku-ASTMA351.
5.High lokushisa Ⅳ
Ukushisa okusebenzayo kwe-valve kungu-730 ～816 ℃, futhi ikalwe njengokushisa okuphezulu IV (okubizwa ngokuthi yi-PIV ngamafuphi). Umkhawulo ophezulu wokushisa okusebenzayo kwe-valve ye-PIV ingu-816 ℃, ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu elinikezwe ibanga elijwayelekile le-ASMEB16134 lokushisa kwengcindezi elikhethelwe ukwakhiwa kwe-valve ngu-816 ℃ (1500υ). Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokuthi izinga lokushisa elisebenzayo lidlule i-816 ° C, insimbi isiseduze nokungena esifundeni sokushisa esakha. Ngalesi sikhathi, insimbi isendaweni ye-plastic deformation, futhi insimbi ine-plasticity enhle, futhi kunzima ukumelana nengcindezi yokusebenza ephezulu namandla we-impact and keep it from deforming. Indaba esemqoka ye-P Ⅳ valve yi-CF8M esezingeni le-ASTMA351 njengokuma okuyisisekelo “izinga lokushisa eliphakeme high eliphakathi nendawo i-carbon chromium nickel molybdenum umhlaba ongajwayelekile we-titanium tantalum oqiniswe ngensimbi emelana nokushisa”. I-CK-20 ne-ASTMA182 F310 ejwayelekile (kufaka phakathi okuqukethwe kwe-C ≥01050%) kanye ne-F310H insimbi engagqwali engamelana nokushisa.
6, izinga lokushisa eliphakeme Ⅴ
Ukushisa okusebenzayo kwe-valve kuphakeme kune-816 ℃, ebizwa nge-PⅤ, i-PⅤ high valve valve (yama-valve okuvala, angalawuli amavalveve wevemvane) kufanele yamukele izindlela ezikhethekile zokuklama, njengokufaka ulwelwesi ulayini noma amanzi noma igesi Ukupholisa ikani qinisekisa ukusebenza okujwayelekile kwe-valve. Ngakho-ke, umkhawulo ophezulu wokushisa okusebenzayo kwe-PⅤ class lokushisa okuphezulu awucacisiwe, ngoba izinga lokushisa elisebenzayo le-valve yokulawula alinqunywa kuphela yilokho okubhaliwe, kodwa ngezindlela ezikhethekile zokwakha, kanye nomgomo oyisisekelo wendlela yokuklama kuyefana. I-valve engu-P lokushisa okuphezulu ingakhetha izinto ezifanelekile ezingakwazi ukuhlangabezana ne-valve ngokuya ngensimbi yokusebenza nokusebenza kwayo nezindlela ezikhethekile zokuklama. Ku-valve yokushisa ephezulu ye-PⅤ, imvamisa i-flapper noma i-butterfly valve ye-flue flapper valve noma i-butterfly valve ivame ukukhethwa kuma-alloys okushisa aphezulu we-HK-30 no-HK-40 kuzinga le-ASTMA297. Imelana nokugqwala, kepha ayikwazi ukumelana nokushaqeka nemithwalo yengcindezi ephezulu.